China Plastic square kọlụm formwork ụlọ ọrụ na suppliers | Uzoigwe
Ntinye NgwaahịaAnyị ụlọ ọrụ mepụtara ọhụrụ ngwaahịa, p ogologo iko eriri mejupụtara ewu formwork, iji polypropylene dị ka isi ihe, iko eriri mesikwuru ọtụtụ ihe mejupụtara, na ebu na ịpị n'ime shapes. The formwork usoro mejupụtara 65 ọkpụrụkpụ ọkọlọtọ formwork na 65 aluminum ekara formwork. Enwere ike iji ya na njikọ njikọta dị iche iche iji nagide ibu ọrụ dị iche iche.
Obere ego na ọrụ dị mfe bụ uru kasịnụ nke pp ogologo iko fiber fiber mejupụtara. Costgwọ bụ naanị 50% nke ụdị aluminom, ibu dị naanị 19kg /, nke ọ bụla bụ 1200x600mm, ibu dị naanị 14kg, ihe owuwu ahụ dị mma, nkwụsị na mgbakọ dị ngwa, a na-echekwa ndị ọrụ aka na oge mmadụ. , a na-ahazi ihe owuwu ahụ, a na-emekwazi ngwa ngwa nke ọma. N'otu oge, pp ogologo iko eriri ọtụtụ ihe mejupụtara formwork bụ eguzogide acid, alkali na corrosion, mfe ọcha, ogologo ọrụ ndụ, na iwerekwa ugboro karịa 60 ugboro.
Dị ka usoro mmepụta dị mfe, enweghị mkpofu mkpofu atọ. Mgbe ị rụsịrị ọrụ ndụ, enwere ike imegharị ya ma jiri ya dị ka ngwaahịa ngwaahịa gburugburu ebe obibi. Ihe pp ogologo iko fiber fiber mejuputara ihe eji eme ihe, nke nwere uru nke ezigbo ike, nfe di iche, ezigbo uzo, ngwa ngwa ngwa ngwa, nchekwa ike na nchedo gburugburu, ga-etinye aka na ahia ulo nke oge a nke na-ekwusi ike oru.
Kọlụm size: 200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm
Mgbape na-agbanwe agbanwe: 200-600mm
Ihie dị mfe, kemfe. Nnukwu panel bụ 120x60cm, nke naanị ya dị 14kg, nke nwere ike ibuli ma dozie naanị otu onye na-adị mfe
Mfe melite. A pụrụ iji ntụtụ kpọchie ogwe osisi dị iche iche. Ogwe ahụ nwere ọgịrịga azụ, nke na-eme ka sistemụ ahụ ghara ịchọrọ osisi na mbọ aka. Ogwe ndị ahụ nwere mgbatị mgbatị ígwè, na-ekwe nkwa ike nke usoro ahụ niile.
Ike dị elu. Ihe eji eme ya bu PP (polypropylene) nke nwere nkpuru iko puru iche, ma mee ka mgbatị di na plastik nke na enyere ndi ogwe aka ijide nsogbu di elu. A na-eji mkpịsị nchara mee ihe ndị ahụ, akụkụ ọ bụla kpọchiri ma ọ dịkarịa ala 4 mkpọ, nke na-eme ka usoro ahụ dum sie ike.
Nwere ike ịrụ ọrụ na-enweghị mgbidi site na eriri mkpara. N'ihi na ọ na-mesikwuru na square ígwè anwụrụ, nke ukwuu dịkwuo ya ike. Mgbe ejiri waling kwado ya, ọ nwere ike ịrụ ọrụ na-enweghịmgbidi site tie mkpara.
Mfe iche na okokụre ihe. N'ihi ọgwụgwọ elu pụrụ iche, ihe anaghị arapara n'ụdị ahụ, yabụ ogwe ndị ahụ achọghị mmanụ tupu ha ejiri ya, mmiri ga-ehichakwa ya. Elu nke mgbidi nke wuru site na ụdị ọrụ anyị dị larịị, enwere ike ịhapụ n'enweghị ọrụ.
Aluminom Formwork Mwube
Modular Aluminom Formwork Systems
Akụkụ Ulo olu nke Ringlock, Ringlock Scaffolding mgbodo, Kwikstage Scaffolding Ngwa, Scaffolding Kemeghi ịghasa Jack, Nrụgide oru Ringlock Scaffolding, Metal Cuplock Scaffolding,